Voadika ny 30 Marsa 2012 7:53 GMT
Taorian'ny faharesena tsy azo nolavina nanaraka ireo fifidianana nokarakarain'ny fitondrany, dia niantso ny mpifanandrina taminy an-telefaonina ny filoha amperin'asa iray taminà firenena afrikana iray mba hiarahaba azy noho ny fandresena azony, na dia mbola tsy nivoaka ofisialy aza ny tena vokatra. Zavatra tsy fahita izany hatramin'ny nahazoan'ireo firenena afrikana ny fahaleovantenany. Kanefa dia izany no zavatra niseho tao Sénégal. Eny, taorian'ny fahareseny nanoloana ny praiminisitra teo ambany fiadidiany fahiny, sady mpifaninana taminy, Macky Sall, ny 25 martsa 2012, ny Filoha Me Abdoualye Wade, dia niantso ilay efa tsinjo fa ho mpandresy mba hiarahaba azy.
Maneho hevitra taminà lahatsoratra iray nosorata'i Steve Beko nivoaka [fr] tao amin'ny Gabon Libre nitondra lohateny hoe “ELECTION DE MACKY SALL AU SENEGAL – (NY NIFIDIANANA AN'I MACKY SALL TAO SENEGAL) : Les premières leçons d’une victoire (Ireo lesona voalohan'ny fandresena)” Maboundou Mounbamba manoratra hoe :